စီရော်နယ်ဒို ကို အနီကတ် မပြသည့် အပေါ် အီရန်နည်းပြ ကားလို့စ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်၊ VAR စနစ်ြေ? - Yangon Media Group
စီရော်နယ်ဒို ကို အနီကတ် မပြသည့် အပေါ် အီရန်နည်းပြ ကားလို့စ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်၊ VAR စနစ်ြေ?
အီရန်နည်းပြ ကားလို့စ်ကွီး ရော့စ်သည် ဒိုင်လူကြီးအထောက် အကူပြုဗီဒီယိုစနစ် (VAR)နှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ပြစ်ဒဏ်ဘောများကို ဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်သည်။ ကားလို့စ်ကွီးရော့စ်၏ အီရန်အသင်းသည် အုပ်စု B နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်၌ ပေါ်တူဂီအသင်းကို သရေခံကစားနိုင်ခဲ့သော်လည်း စပိန်အသင်း၏သရေပွဲရလဒ်ကြောင့် အုပ်စုအဆင့်မှထွက်ခဲ့ရပြီး အဆိုပါပွဲတွင် အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ဒိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် ကွီးရော့ဇ်ကဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပေါ်တူဂီနှင့် တစ်ဂိုးစီသရေ ကျသောပွဲတွင် ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှူးစီရော်နယ်ဒိုက အီရန်နောက်ခံလူ ပူရာလီဂန်ဂျီကို တံတောင်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့သော်လည်း အဝါကတ်သာပြသခဲ့ခြင်းအတွက် ဒေါသတကြီးဝေဖန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပွဲတစ်ပွဲတွင် မည်သူကဒိုင်လူကြီးဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းတိကျစွာနှင့် ပွင့်လင်း မြင်သာသောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကွီး ရော့ဇ်က ”ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေအရတော့ တံတောင်နဲ့ တိုက်ခိုက်ပြီဆိုရင် ဒါအနီကတ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီစည်းမျဉ်းတွေက မက်ဆီ၊ စီရော်နယ်ဒိုတို့လို ကစားသမားတွေအပေါ်တော့ သက်ရောက်မှုမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ သိဖို့လိုပေမယ့် ဒါကိုကြည့်ခွင့်မရဘူး။ ပြိုင်ပွဲမှာက ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲပေးမယ့် စနစ်တစ်ခုက ရှိနေပြီဆိုတော့ ကျန်တာဘယ်သူ့ မှာမှ တာဝန်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ပွဲတစ်ပွဲမှာ ဘယ်သူက ဒိုင်လူကြီးလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့သိချင်ပါတယ်”ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
အဆိုပါပွဲတွင် ကွင်းလယ်ဒိုင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ပါရာဂွေး ဒိုင်လူကြီး ကာဆာရက်စ်သည် VAR ကို သုံးကြိမ်ကြည့်၍ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရာတွင် ပင်နယ်တီနှစ်ကြိမ်နှင့် အဝါကတ်တစ်ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ အုပ်စု B ၏အခြားပွဲစဉ်တစ်ပွဲ ဖြစ်သော စပိန်နှင့်မော်ရိုကို တို့ပွဲစဉ်တွင်လည်း စပိန်အသင်း၏ နောက်ကျချေပဂိုးမှာ လူကျွံအနေအထား ဖြင့် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ရသော ကြောင်း မော်ရိုကိုနောက်ခံလူ အမ်ရာဘတ်က ပွဲအပြီးတွင် ရုပ်သံကင် မရာကိုတည့်တည့်ကြည့်ကာ B စနစ်အားဆဲဆိုခဲ့သည်။ စပိန်တိုက်စစ်မှူး အက်စ်ပက်သွင်းယူသော နောက်ဆုံးချေပဂိုးကို ဒိုင်လူကြီးက လူကျွံဘောအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း VAR ကြည့်၍ ပြန်လည်ဆုံးဖြတ်ကာ ဂိုးပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။